Kana iwe uchida kutsvaga yekare macOS vhezheni, unovawana pano | Ndinobva ku mac
Kana iwe uchida kutsvaga yekare macOS vhezheni, unovawana pano
Manuel Alonso | 04/12/2021 14:00 | Mac Os X
Panogona kunge paine zvikonzero zvakawanda nei uchida kudhawunirodha yekare sisitimu yekushandisa yeMac yako.Chikuru ndechekuti wawana, semuenzaniso, Mac ine makore mashoma uye unoda yakanakisa macOS sisitimu yekushandisa yeiyo modhi. Zvisinei, kunyange zvazvo zvichiita sokuti rinogona kuva basa riri nyore, rinogona kuva rakaoma asi kwete rakawandisa kana ukaramba uchiverenga iyi post.
Isu tiri parizvino mushanduro Monterey kubva macOS. Asi izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kuve uine iyi yekushandisa system nekukomekerwa kwemutemo. Ndizvo zvinodiwa nekambani uye pakadzika pasi ine zvikonzero zvakanaka nazvo. Asi ichokwadi zvakare kuti pane mukana wekuti Mac yako haisi yemazuva ano uye haugone kuiisa. Iwe unogona kutoda kudzosera maitiro uye kudzokera kune yekare macOS nekuti iyo nyowani haishande sezvainofanirwa. Chero chikonzero chako, honguNguva dzose zvakanaka kuziva kwekuwana iwo ekare macOS.
Izvo zviri pachena ndezvekuti kana wanga uchishandisa Mac kwenguva yakareba, iwe unozoziva kuti zvinobatsira sei kuchengeta kopi yega yega macOS sezvainogadziridzwa. Kunyange apo ose akanga achiwanika nyore nyore, akanga achiri makuru, zvichiita kuti kuve nyore zvikuru kushandisa kopi yomunzvimbomo. Ikozvino, kubva muna Gumiguru 2019, chero yekare macOS yauchiri nemakopi haishande. Iwe haugone kuisa macOS kubva kwavari nekuti masetifiketi ari pavari akatopera basa.
Apple inochengeta vakura macOS installers asi inovanza
Apple inochengeta vazvino vakura vanoisa muApp Store, asi inovavanza kubva pakutsvaga kuri nyore. Iwe hausi kuvaona pane rondedzero. Haunawo kuvawana nekutsvaga kwakananga. Iwe waifanira kuverenga zvinyorwa zvekutsigira zveApple usati wawana chinongedzo chaizovhura zvine mashiripiti mugadziri paApp Store. Iye zvino, chimwe chinhu chakakosha chinofanira kufungwa nezvazvo:
Kunyange Apple ichibvuma Macs kufambidzana makore akawanda kupfuura zvinoita sezvinobvira, tkuchave kuchine makomputa akawanda asingazombokwanisi kugadzirisa kuMonterey kana, hongu, kuApple Silicon.
Zvatichakurudzira ndezvekuti kuti usazotsvaga nekutsvaga, Isu tichakusiira iwe zvinongedzo zvevakuru vekare vanoisa pano:
macOS Big Sur shanduro 11
macOS Yakakwira Sierra 10.13
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Kana iwe uchida kutsvaga yekare macOS vhezheni, unovawana pano
Ger Sar akadaro
Iyo link inotumira kuApple Music
Pindura kuna Ger Sar
Kuti ugone kushandisa vanoisa vane zvitupa zvakapera, unongo nonoka zuva remuchina wako. Muna 2019 zvitupa izvozvo zvaive kushanda.
Pindura kuna wikter
Kuti ukwanise kushandisa mifananidzo ine zvitupa zvakapera, unongo nonoka zuva remuchina wawakaisirwa. Zvitupa izvozvo zvaive kushanda muna 2019.
Mapfumbamwe mazita emufirimu CODA kubva kuHollywood Critics Association
Vanoshandisa AirTags kuba mota dzepamusoro.